ZVINOTAURWA NEBHAIBHERI: ‘Ndiani angava mueni mutende raMwari? Ndiye anofamba asina mhosva uye anoita zvakarurama uye anotaura chokwadi mumwoyo make.’—Pisarema 15:1, 2.
CHAZVAKANAKIRA: Vanhu vakawanda vanofarira vanhu vakatendeseka uye vari pachokwadi. Ko kana pakamuka mukana wokuti munhu aite mari asi achizviita zvisina kuti twasu uye pasina anozofa akazviziva? Apa ndipo panenge pava kuratidza zvakaita mwoyo womunhu.
Raquel aiita basa rokutenga zvinhu zvekambani yaaishandira. Anoti: “Mamwe makambani anotengesa zvinhu aindivimbisa kuti ndikaatengera anozondipawo kamari. Vaiti kana ndikatenga kwavari vaizoderedza mutengo vondipa kamari kacho panzvimbo pokuti kadzokere kukambani kwangu. Asi ndaigara ndichiyeuka zvinotaurwa neBhaibheri nezvekutendeseka saka ndaibva ndaramba. Nyaya iyi yakazosvika munzeve dzashefu wangu uye zvakabva zvaita kuti awedzere kuvimba neni.”
Dai Raquel akanga aita kamwoyo kokuda mari, angadai akatoiita munguva pfupi. Ko kana zvaizosvika munzeve dzashefu wake? Aizoramba ari pabasa here? Asazozvikanganisira here pakuwana mabasa mune ramangwana? Chainyanya kukosheswa naRaquel kwaiva kuva nehana yakachena netsika dzakanaka. ‘Zita rakanaka rinofanira kusarudzwa panzvimbo pepfuma zhinji; kuremekedzwa kuri nani kupfuura sirivha negoridhe,’ inodaro Zvirevo 22:1.
Jessie akazivikanwa somushandi akatendeseka
Jessie aivawo munhu akatendeseka uye anovimbwa naye. Izvi zvakaita kuti shefu wake amuremekedze. Zvikaguma nei? Akaitwa maneja uye akanga ava kukwanisa kushanda zvakati sunungukei, zvichiita kuti awane nguva yakawanda yokuva nemudzimai wake nevana uye yokuita zvokunamata.
Vamwe vanamuzvinabhizimisi pavanenge vachitsvaka vanhu vebasa, vanotsvaka vanhu vavanoziva kuti vakatendeseka. Somuenzaniso, mumwe maneja munyika yePhilippines akanyorera hofisi yeZvapupu zvaJehovha yomunyika iyoyo achitsvaka Zvapupu zviri kuda basa. Akati, chaanovadira ndechokuti “vanoshanda nesimba, vakatendeseka uye vanoshanda nemwoyo wose.” Mbiri nokukudzwa zvinoenda kuna Jehovha Mwari uyo anotidzidzisa ‘kuvenga zvakaipa’ uye ‘kuda zvakanaka.’—Amosi 5:15.